ဘုရားသခင်ထံ အကြွင်းမဲ့ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
3May 20122Oct 2018
အမည်မသိစာရေးသူ တစ်ယောက်က သည်လိုရေးသားဖူးသည်။ “ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းသည် လူသားတို့ အနေနှင့် ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ပေးနိုင်သည့် အရာများတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် တန်ဖိုး အရှိဆုံးသော အရာဖြစ်သည်”။
အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံခြင်း လို့ ဆိုတဲ့အခါ မိတ်ဆွေ ဘယ်လို နားလည်ပါသလည်း? ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံခြင်း ဆိုဒါ ကိုယ့်ထက် တန်ခိုးအာဏာ ပိုရှိသူ တစ်စုံ တစ်ယောက် ထံမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်ခြင်း ရှိခြင်း အလုံးစုံကို အပ်နှံခြင်းဖြစ်တယ်။
အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံခြင်း ဆိုဒါ ငယ်ရွယ်သူတွေအတွက် မိဘများထံမှာ၊ ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် ဆရာဆရာမများထံမှာ၊ အလုပ် လုပ်တဲ့ အရွယ်ရောက်ရင် အထက်အရာရှိ လူကြီးများထံမှာ..အဲ ဘုရားကျောင်း ရောက်ရင်တော့ ဘုရားသခင်ထံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံ ခြင်း ရိုကျိုးခြင်းလား..? မဟုတ်ပါ..နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး ရောက်ရာ နေရာတိုင်း ဘုရားရှင်ထံ ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းဖြစ်တယ်။ အချိန်အခါ၊ နေရာမရွေး ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေးစား လိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်းတက်နေသော အချိန်တွင်သာ မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းတက် နေသော အချိန်တွင်လည်း ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ အနီးကပ်ဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးသော အရှင်သခင်ဖြစ် သလို လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ အနီးကပ်ဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးသော အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။
လူသားများသည် တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဟုတ်လှပြီဟုထင်တတ်ကြသည်။ ဘုရားပေးသော အောင်မြင်မှု၊ ရာထူးနှင့် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ့်ဘဝ၏ အရှင်သခင်၊ ကိုယ့်ဘဝ၏ Boss နေရာတွင် ထားမှန်းမသိ ထားတတ်ကြသည်။
တစ်ခါက ညအမှောင်တွင် ခရီးသွားသော သင်္ဘော တစ်စီး မှ ကပ္ပတိန်သည် ရှေ့တဲ့တဲ့ အမှောင်ထု အတွင်း တွေ့ရသော မှိန်ပြပြ မီးရောင်ကြောင့် သင်္ဘော အချင်းချင်း တိုက်မိ မှာစိုးသဖြင့် ဝါယာလက်စ် ရေဒီယိုဖြင့် လှမ်း၍ သတိပေးလိုက်သည်။
“တောင်ဖက်ကို ၁၀ ဒီဂရီ ချက်ခြင်းကွေ့လိုက်ပါ”
ချက်ချင်း မဆိုင်းမတွ အဖြေပြန်ရသည်။
“မြောက်ဖက်ကို ၁၀ ဒီဂရီ ချက်ခြင်းကွေ့လိုက်ပါ”
သင်္ဘော ကပ္ပတိန်သည် သူ၏ သတိပေးချက်ကို လက်မခံဘဲ သူ့ကိုတောင် ကွေ့ဖို့ ပြန် အကြောင်း ဒါ ကြားရတဲ့အခါ စိတ်တိုသွားပြီး ပြန်သတိပေးလိုက်သည်။
“တောင်ဖက်ကို ၁၀ ဒီဂရီ အမြန်ဆုံး ကွေ့မောင်းပါ၊ ငါက သင်္ဘော ကပ္ပတိန်ဖြစ်တယ်”
အဝေးမှ လည်း ချက်ခြင်း အဖြေပြန်ရသည်။
“မြောက်ဖက်ကို ၁၀ ဒီဂရီ အမြန်ဆုံး ကွေ့လိုက်ပါ။ ငါက တတိယတန်း သင်္ဘော သား ဂျုန်းဖြစ်တယ်”
ကပ္ပတိန်က စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း ရင်ဆိုင်နိုင်သည့် အန္တရယ်ကို လည်းစဉ်းစားရင်း စိုးရိမ် ထိပ်လန့်သော်လည်း တတိယတန်း သင်္ဘော သား အဆင့် ရှိသူ တစ်ယောက်ကိုလည်း အလျှော့ မပေးချင် သောကြောင့် အမြန်ဆုံး ပြန်အကြောင်းလိုက်သည်။
“တောင်ဖက်ကို ၁၀ ဒီဂရီ ချက်ခြင်း ကွေ့မောင်းပါ၊ ငါက စစ်သင်္ဘော ကြီးတစ်စီးဖြစ်တယ်”
တခြားဖက်မှလည်း ချက်ခြင်း အဖြေရပြန်သည်။
“မြောက်ဖက်ကို ၁၀ ဒီဂရီ အမြန်ဆုံး ကွေ့ လိုက်ပါ၊ ငါက မီးပြတိုက်ဖြစ်တယ်”
ကျွန်တော် လူသားတွေဟာ ဒီ အဖြစ်အပျက်ကလေးထဲက စစ်သင်္ဘော ကပ္ပတိန် လိုဖြစ်တတ်ကြတယ်။ သူ့ဆီကို တဲ့တဲ့ လာနေတဲ့ သင်္ဘော တစ်စီး ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ဖက်က ပဲ့ကို အနည်းငယ်လှည့် လိုက်ရုံနဲ့ အန္တရယ်ကိုရှောင်ကွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကပ္ပတိန် ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ရာထူးမာန၊ အခြားသင်္ဘော တစ်စီးကို ဖျက်ဆီးချေမှုန်းပစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့စွမ်းပကား တို့အပေါ်မှာ လွန်ကဲစွာ ရပ်တည် ပြီး ပြုမူလိုက်တဲ့အခါ ရှေ့တဲ့တဲ့မှာ ရှိနေတဲ့ အရာဟာ အခြားသင်္ဘော တစ်စီး မဟုတ်ဘဲ၊ မီးပြတိုက်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုဒါကို သတိမူဖို့ လွတ်သွားတယ်။ သင်္ဘော ကြီးငယ် တို့ကို အလင်းပေး လမ်းပြပေးတဲ့ မီးပြတိုက်၊ တနည်းအားဖြင့် သင်္ဘော ကြီးငယ်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်၊ ကယ်တင်ရှင် ကို သတိမရလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
မိတ်ဆွေဟာ ယုံကြည်သူ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု ရရှိပြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်လည်း ဘုရားပေးတဲ့ ကောင်းကြီး၊ အောင်မြင်ခြင်း နဲ့ စည်းစိမ် အာဏာများအပေါ် ရပ်တည်မိ လွန်းရင် ကောင်းကြီးပေးသူ အရှင်သခင် ကို သတိမူဖို့ လွတ်သွားမှန်း မသိ လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရောက်လေရာ အရပ်တိုင်းမှာ ဘုရားရှင်အား အမြဲတမ်း ဦးထိပ်ထား နိုင်သောသူ ဖြစ်နိုင် ကြပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင်း…….
ဝန်ခံချက်။ ။Steve Shepherd ၏ တရားဒေသနာ တစ်ခုတွင် ပြောသော ပုံဥပမာကို ယူ၍ ထပ်ဆင့် တင်ပြထားပါသည်။
Previous Seven Mountains Part (4)
Next မီးလံွ်ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနေသာ အသက္တာျဖင့္အသက္ရွင္ေနျခင္း
Pingback: ဘုရားသခင္ထံ အၾကြင္းမဲ့ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း | Calvary Burmese Church